आजको तस्वीर : एकै रातमा किन यस्ता भए, मेहरसिँह पाईजा ? – ebaglung.com
आजको तस्वीर : एकै रातमा किन यस्ता भए, मेहरसिँह पाईजा ?
२०७५ बैशाख २५, मंगलवार १२:३९	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
दिनेश शर्मा, खर्वाङ २०७५ बैशाख २५ । आज बिहान बडीगाड गाउपालिकाका अध्यक्ष मेहर सिँह पाईजा हिँड्न पनि सकेनन् । उनी अरु कसैको पीठ्यूँमा बुई चढेर गाउपालिका कार्यालय आईपुगे । उनलाई बोक्ने व्यक्तिले गाउपालिकाको वडा कक्षमा लगेर बिसायो । उनी लौरोका सहारामा टुक्रुक्क बेन्चमा बसे । (तस्वीर)
उनको जग्गामा श्रोत भएको पानीलाई गाउँलेले खानेपानीको लागी भनेर उनलाई नै नपुग्ने गरी सबै पानी लगिदिएपछी उजुरी दिन गाउपालिका आएको पाईजाले बताए ।
बयोबृद्ध अशक्त देखिएका अध्यक्ष पाईजाको यो रुपलाई देख्नेहरु चकित परे । हिजो पत्रकारिता उद्घोषण तालिमको समापन समारोहमा प्रमुख अतिथी भएर भाग लिँदा त टाँठै थिए, तन्नेरी नै देखिन्थे । एक रातमै यति बुढो ? के रोग लागेछ हाम्रा अध्यक्षलाई र हिँड्रनै नसक्ने बनेर बोकाएर आए ? स्थानीयबासीलाई अचम्म लाग्नु स्वाभाविकै थियो ।
यस भेगका कृषि विशेषज्ञ मानिने मेहरसिँह खेतीपातीमा माहिर त छँदै थिए, अभिनय कलामा पनि खप्पिसै रहेछन्’ गाउँपालिकामा भेला भएकाहरु बीच गाईँगुईँ चलेपछी बल्ल स्थानीयले चाल पाए, ‘यो त अध्यक्षको नाटक पो रहे छ ।’
हो, त्यो नाटकै थियो । अभिनय कलामा पनि पोख्त रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरेर उपस्थित सबैलाई चकित पारेरै छोडे अध्यक्ष पाईजाले ।
गत बैशाख १९ गते देखी बडीगाड महिला तथा बालबालिका सशक्तिकरण केन्द्रको आयोजनामा सुरु भएको आठ दिने सामुदायिक आधारभूत मेलमिलाप तालीमको आज सातौँ दिन अभ्यास कक्षामा कृत्रिम मुद्दामा पाईजा ९० वर्षिय अशक्त बुद्ध बनेर गाउपालिकामा उजुरी गर्न आएका थिए ।
तालिममा सहभागी हरु आठ दिनको तालिम प्राप्त गरेपछी बडिगाड गाउपालिका मा मेलमिलाप कर्ताको रुपमा सुचिकृत हुने र तालिम प्राप्त मेलमिलाप कर्ताले देबयानी प्रकृतिका सामान्य मुद्दाहरु स्थानिय मेलमिलाप केन्द्र मा मिलाउन सक्ने मुख्य प्रशिक्षक अधिबक्ता ममतादेबी शर्माले इबागलुङलाई बताईन् ।
गाउपालिका भित्रको वडा कार्यलय मातहतमा मेलमिलाप केन्द्र रहने कानुनी ब्यवस्था अनुरुप वडामातहतमा मेलमिलाप कर्ताले दुबै पक्षको जित हुने गरि win/win को वातावरण बनाएर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। दुबै पक्षको जित हुने गरि मिलाएर मिलापत्र गराइ मेलमिलाप कर्ताले पठाउछ।
पाच ओटा समूह बनाएर समाजमा आइरहेका समस्याहरुलाई तालिममा मुद्दा बनाइ मेलमिलाप कर्तापक्ष बिपक्ष बनी मेलमिलाप कर्ताको भुमिकालाई अभ्यास गरिएको अधिबक्ता शर्माले बताईन्।
गाउपालिका उपाध्यक्ष अम्मर बहादुर श्रीसले मेलमिलाप कर्ताको भुमिका निभाएका थिए । तालीम भोलि समापन हुने आयोजकले जानकारी दिए
कुस्मीसेरामा ‘फाल्गनु २४’ फिल्मको च्यारिटी शो गरिने !